Finalka Europa League Oo La Go'aamiyay Ka Dib Markii Ay Inter Milan Xasuuqday Shakhtar Donestk & Lukaku Oo Rikoodh Cusub Dhigay - Gool24.Net
Finalka Europa League Oo La Go’aamiyay Ka Dib Markii Ay Inter Milan Xasuuqday Shakhtar Donestk & Lukaku Oo Rikoodh Cusub Dhigay
August 17, 2020 Saed Mohamed
Kooxda Inter Milan ayaa u soo baxday finalka koobka Europa League ka dib markii ay 5-0 ku xasuuqeen kooxda Shakhtar Donestk ciyaartii semi-finalka ee ka dhacday dalka Jarmalka.
Guusha ay gaartay kooxda Inter Milan ayaa ka dhigeysa inay markii afaraad taariikhdooda ay u soo baxeen finalka Europa League ama UEFA Cup iyagoo habeen Jimcaha finalka la ciyaari doona kooxda khibrada u leh koobkaan ee Sevilla.
Tababare Antonio Conte ayaa kooxdiisa ku hogaamiyay caawa guul weyn iyadoo goolasha uu u furay Lautaro Martinez qeybtii hore ee ciyaarta, goolkaas ayaana lagu kala nastay.
Laakiin qeybtii labaad ayay Inter Milan ooda ka qaaday goolasha iyadoo goolka labaad uu u saxiixay daqiiqadii 64aad Danilo D’Ambrosio halka Lautaro Martinez uu saxiixay goolkiisii labaad ee ciyaarta ahaana goolkii seddexaad ee Inter Milan.
Ka dib waxaa shumaca gooldhalinta la wareegay Romelu Lukaku kaasoo labo gool ku dhaliyay lix daqiiqo gudaheed intii u dhaxeysay daqiiqadihii 78aad iyo 84aad ee ciyaarta.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 5-0 oo ay Inter Milan ku xasuuqday kooxda Shakhtar iyadoo Romelu Lukaku uu dhigay rikoodh cusub.
RIKOODH: Romelu Lukaku ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee gool ka dhaliya 10 kulan oo isku xigta tartanka Europa League, ma jiro ciyaaryahan abid sidaas sameeyay.
Kooxdiisa Inter Milan waxay finalka ku balansatay Sevilla oo xalay ka soo talaabsatay Manchester United iyadoo finalka la ciyaari doono habeenka Jimcaha ee 21ka bishaan Agoosto.
Romelu Lukaku, Alexis Sanchez iyo Ashley Young ayaan jeclaan lahaa inay finalka ka horyimaadaan kooxdoodii hore ee Man United, laakiin waxay haatan ku faraxsan yihiin inay finalka Europa League gaareen iyagoo wajihi doona Sevilla.